I-BerryWM, i-Blackbox, i-BSPWM, i-Byobu ne-Compiz: ama-WM amanye ama-5 we-Linux | Kusuka kuLinux
Ukuqhubeka nochungechunge lwethu lwezincwadi ku Abaphathi bamawindi (Abaphathi beWindows - WM, ngesiNgisi), namhlanje sizoqhubeka nesethu okuthunyelwe kwesibili mayelana ne-WM, lapho sizobuyekeza khona ama-5 alandelayo wabo, kusuka ohlwini lwethu lwe 50 ekhona
Masikhumbule ukuthi lolu chungechunge lwezincwadi ku-WM kuhloswe ngalo ukucacisa izici ezibalulekile zazo, njengokuthi, ingabe zikhona noma cha amaphrojekthi asebenzayo, eyani Uhlobo lwe-WM yibo, okungokwabo izici eziphambili, futhi zifakwa kanjani, kwezinye izici. Futhi-ke, konke ngeSpanishi.
Futhi uma kwenzeka ufuna ukufunda i- okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene nge-5 WM yokuqala ebuyekeziwe, okulandelayo kungachofozwa isixhumanisi.
"Imenenja yamawindi encane ezinzile ebhalwe ngo-C ngezinhlelo ze-unix".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe ngaphansi kwezinyanga ezi-4 ezedlule.
I-Tipo: Ukubeka phansi
Ilawulwa ngeklayenti lomugqa womyalo onamandla, ovumela abasebenzisi ukuthi balawule amawindi nge-hotkey daemon efana ne- "sxhkd" noma ukunweba ukusebenza okuthile ngemibhalo ye-Shell.
Inekhodi yomthombo encane, elula kalula, egcwele izinketho zokushintsha nokwandisa ukubonakala kwamawindi, ezicini ezihlobene nemingcele, imigoqo yesihloko nombhalo wewindi.
Ikuvumela ukuthi ubeke intuitively amawindi amasha ezindaweni ezingasebenzi, futhi iphatha kahle iphuzu lamadeskithophu abonakalayo.
Ukubona izinyathelo zokufaka ngohlobo ngalunye lwe- inqubo inikwe amandla chofoza ngokulandelayo isixhumanisi. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
“Imfoloko yeBlackBoxWM CVS yokuqala ebanjelwe eSourceforge, ngenkathi lokhu kugcinwa kusingathwa kwiGitHub. Ngaphezu kwalokho, kufaka phakathi lonke ushintsho olwenziwe endaweni esemthethweni ye-Blackbox CVS, kanye nezimagqabhagqabha eziqoqwe ku-pdl-linux, kwaDebian, kuhlu lwezinambuzane zeBlackbox nakwezinye izimfoloko ezivela kwaGitHub. Kubandakanya nokuhambisana okuthuthukisiwe kwe-EWMH / ICCCM.".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe izinyanga eziyi-6.
Imihlobiso yewindi ifaka imingcele nebha yesihloko. Ngokwengeziwe, ibha yesihloko inesithonjana futhi inciphisa, ikhulise, futhi ivale izinkinobho.
Kubhalwe ku-C ++, kunekhodi encane enemisebenzi eyakhelwe ngaphakathi yokunikeza okuqinile, ama-gradients namabhele. Ngaphezu kwalokho, isebenza ngokushesha okukhulu, iletha amamenyu alula nokusekelwa kwama-desktops amaningi.
Inezithonjana zohlobo "lwesinqamuleli" kwideskithophu, inganciphisa imisebenzi / windows ibe yisithonjana futhi ifaka nokusekelwa kwezindikimba nemibala yangokwezifiso.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe le-blackboxNgakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
"NOMAn I-WM emele amawindi njengamaqabunga esihlahla esiphelele kanambambili. Iphendula kuphela kumicimbi ye-X Windows, futhi imilayezo eyitholayo iya kusokhethi elizinikele. Isebenza ngokubambisana nohlelo olubizwa nge- "bspc" oluphethe ukubhala imiyalezo kusokhethi ye-bspwm. Ngenkathi i-bspwm ingaphathi noma iyiphi ikhibhodi noma okokufaka kwesikhombi, ngakho-ke udinga uhlelo lomuntu wesithathu (isb.sxhkd) ukuhumusha ikhibhodi nemicimbi yesikhombi ekuncengeni kwe-bspc.".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe ezinsukwini eziyi-8 ezedlule.
Isebenza ngamafayili wokumisa afundeka kalula futhi alungisekayo nge-sxhkdrc ne-bspwmrc.
Kubhalwe ngolimi lwe-C futhi kunikezwe ilayisense yiFreeBSD. Isekela imigomo yeRandR neXinerama kanye namazinga e-EWMH ne-ICCCM.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe "bspwm"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
“I-open source terminal multiplexer ne-window manager ngaphansi kwelayisensi ye-GPLv3. Ekuqaleni yayenzelwe ukuhlinzeka ngezithuthukisi ezinhle kunxenye esebenzayo, elula nengokoqobo yeGNU Screen, yokusatshalaliswa kweseva Ubuntu.".
I-Tipo: Kususelwa embhalweni
Kubandakanya amaphrofayili athuthukisiwe, izinqamuleli zekhibhodi ezilula, nezinsiza zokumisa.
Isebenza ekusatshalalisweni okuningi kweLinux, BSD neMac, ngenkathi pInikeza indlela ewusizo kakhulu yokwengeza ukusebenza okwengeziwe kuwindi elijwayelekile lokugcina.
Iqalisa umphathi wewindi osuselwa embhalweni (kungaba isikrini noma i-tmux) okwenza kube lula ukubonisa ulwazi nezaziso zesimo sohlelo ngaphakathi kwemigqa emibili ezansi kweseshini yesikrini. Ibuye ivumele izikhathi zokugcina ezinamathebhu amaningi, kufinyeleleke ngokusebenzisa ukuchofoza okhiye okulula.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe «byobu»Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
"Imenenja yokwakheka kwe-OpenGL esebenzisa i- "GLX_EXT_texture_from_pixmap" ukuhlanganisa ukuqondisa kabusha amawindi wezinga eliphezulu kuzinto zokuthungwa. Ine-plug-in eguquguqukayo yohlelo futhi yakhelwe ukusebenza kahle kuma-hardware amaningi wekhompiyutha. Ingasebenza futhi njengomphathi wewindi, ukwenza ngcono ukuphathwa kwezinhlelo zokusebenza zedeskithophu, ukuvumela ukuhambisa noma ukushintsha usayizi wamawindi, ukushintsha indawo yokusebenza, ukushintsha iwindi kalula (usebenzisa i-alt-tab noma into enjalo), phakathi ezinye izinto".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe ezinyangeni eziyi-9 ezedlule.
Kungumphumela wokuhlanganiswa kwawo wonke amagatsha eCompiz yoqobo aqala eNovell eyenziwe nguDavid Reveman, uBeryl, uCompiz-Fusion, nabanye ngaphambili. ICompiz iqale ekuqaleni kwaNovell njengokuncoma kwiseva yokubonisa ye-XGL engasasebenzi manje. Ngenkathi iCompiz-Fusion engasasebenzi manje inikezwa njengesengezo seCompiz.
Inikeza ukuphathwa kwewindi okusheshisiwe kwehadiwe nokwakhiwa kwedeskithophu nge-OpenGL, kusetshenziswa izindlela ezinikeza njenge-AIGLX, i-Xgl, nezixazululo eziqondile zokunikeza kwenye i-hardware.
Inesistimu yokumisa eqinile futhi esebenzayo. Ine-interface enamandla futhi eguquguqukayo ye-plugin, evumela amathuba wokunwebeka angenamkhawulo. Ngaphezu kwalokho, inomphakathi omkhulu wabathuthukisi nabasebenzisi abathuthukisa, bahlole futhi basebenzise ama-plugins athuthukisiwe.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- compiz iphaketheNgakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nalezi ezi-5 ezilandelayo «Gestores de Ventanas», ezimele kunoma iyiphi «Entorno de Escritorio»ubizile IBerryWM, iBlackbox, iBSPWM, iByobu neCompiz, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-BerryWM, i-Blackbox, i-BSPWM, i-Byobu ne-Compiz: ama-WM amanye ama-5 we-Linux